Njengomcwaningi osezingeni eliphezulu, umenzi nomthungi, uJiangsu Meixin Optoelectronics Technology Limited Ungenye yabakhiqizi abahamba phambili bokufaka izigqoko zokuvikela insimbi eChina. Simatasa emkhakheni wokuhlinzeka ngemikhiqizo yokuvikela iso ngezinqubo zokufaka i-welding, kufaka phakathi izingilazi ezi-welding, izigqoko zokuphefumulela umthunzi ezingaguquki, isivivinyo somoya sokuhlanzwa komoya kanye nokufakwa.
Ngocwaningo oluthuthukile lwesayensi, amadivaysi akhiqiza kanye nokuhlola, inkampani yethu ingenye yezinkampani eziholayo ezifunda futhi zikhiqize imikhiqizo efanele ezweni lethu. Sigcizelela ekwakheni okusha kwesayensi nezobuchwepheshe kanye nocwaningo oluzimele kanye nentuthuko. Ama-20% abasebenzi enkampanini yethu angabachwepheshe, okuyiqembu lobuchwepheshe okufanele liziqhenye ngalo. Imikhiqizo yethu ifinyelele ezingeni eliphakeme lomhlaba jikelele.
Inkampani yethu ihlose ukusungula okuqhubekayo kanye nokuwina ngokuwina namakhasimende. Sizohlinzeka ngemikhiqizo nezinsizakalo eziphakeme ngokuzithoba okukhulu nangomdlandla.
Isigqoko se-MX-9 Auto Helging Welding ngombani
Ukwethemba kwakho kungamandla ethu amakhulu okuqhubela phambili inqubekela phambili, sicela usithembe amaphesenti ayi-100.
IJiangsu Meixin Optoelectronics Technology Co, Ltd., etholakala eNantong City, eSifundazweni saseJiangsu, okuyibhizinisi lesayensi, elibheka ukuthuthukisa, ukukhiqiza nokuthengisa imikhiqizo kagesi. Imikhiqizo eyinhloko: imaski ye-welding emnyama emnyama, izinsimbi, izixhumi, izithonjana ze-Stud kanye nokufakwa kwayo nokunye.
Bambalwa kunabantu aba-5
0% Izinga Lokuphendula Ngokushesha
I-3000 - 5000 amamitha skwele